16 | octobre | 2020 | InfoKmada
Tohin’ny hezaka izany efa natao, teny amin’ny kaominina Masindray, indray androany no nanatanterahan’ny Fikambanana Vehivavy Malagasy Miara-Miainga ny fivarotana fitaovam-pianarana amin’ny vidiny mirary. Tanjon’ny hetsika ny hanalefahana ny fahasahiranan’ny ray aman-dreny amin’izao fampidirana mpianatra izao, hoy ny tomponandraikitra avy amin’ny VMMM.
Ahiana ny mety ho fiverenan’ny fiparitahan’ny Covid-19 ao andrenivohitr’i Betsimisaraka ao amin’izao fotoana izao hoy ireo tomponandraikitra misahana ny fitsaboana. Efa maro amin’ireo olompirenena ao Toamasina ao no tsy manaja intsony ny fepetra sakana maro samihafa isan’ireny ny tsy fanaovana intsony ny arovava orona.
Taorian’ny fametraham-panontanian’ny mpitondra tenin’ny governemanta ny amin’ny tena antom-pisian’ny fiaraha-monim-pirenena , namory mpanao gazety io maraina io ny fiarahamonim-pirenena maromaro namerina nanazava ny atao hoe fiarahamonim-pirenena fa indrindra namerina nametraka ireo fitakiana miisa 3 mikasika ny mangarahara sy ny tamberin’andraikitra.
Nampiakam-peo ny sendikan’ny mpitsara eto Madagasikara androany, ambaran’izy ireo fa mitsabaka amin’ny raharaham-pitsarana ny fahefana mpanatanteraka ary tsy mampihatra ny didim-pitsarana. Vokatr’io tandindonin-doza ny fahefam-pitsarana raha ny nambaran’ny filohan’ny SMM androany.
Andry RAJOELINA : tsy maintsy mandroso ny distrikan’Antsohihy sy ny faritra Sofia
Tsy maintsy mandroso ny distrikan’Antsohihy sy ny faritra Sofia iray manontolo hoy ny Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara nandritra ny fandalovany tao an-toerana. Efa vita ihany koa ny fanaovana « étude de faisabilité approfondie » ireo lalana mampifandray an'Antsohihy sy Bealalana sy ny lalana mampitohy Antsohihy sy Befandriana Avaratra.
Notontosaina androany ny fihaonana an-databatra boribory tamin’ny minisietrahn’ny fanajariana ny tany sy ny asa vaventy niaraka tamin’ireo sehatra tsy miankina, niresahana ny mikasika ny politikam-panjakana momba ny fampandrosoana ny tanàn-dehibe. Zava-dehibe ny fiaraha-mientana amin’ny tsy miankina sy ny fanjakana amin’ny fanatanterahana ny Politique Nationale du Développement Urbain, araka ny nivoitra androany, ary naneho ny fahavononany hanohana izany ireo misehatra amin’ny tsy miankina.
Feno 124 taona androany ny nitifirana an’i Rainandriamampandry niaraka tamin’ny Printsy Ratsimamanga teo Antaninarenina. Araka ny tantara, baiko avy min’ny Gallieni no nampamonoana azy. Misy tsangambato hanamarihana izany toy ny eny Ankadifotsy.
Loi sur l’opposition : hiverina hodinihana eo anatrehan’ireo Loholona
Miandry ny fanapahan-kevitra horaisin’ireo Loholon’ny Madagasikara amin’izao fotoana izao ny volavolan-dalàna hifehy ny ny mpanohatra eto Madagasikara. Isany lahadinika ao anatin’ny fivoriana ara-potoan’ny Antenimiera izao ny mahakasika izany. Araka izany mitodika eny amin’ny lapan’Anosikely ny mason’ny mpanara-baovao ny amin’ny hoe, holanian’izy ireo izany sa tsia.
HVM : tsy tokony hisy ny fanavakavahana ataon’ny mpitondra
Teboka 04 lehibe no noresahan’ny antoko HVM taorian’ny fivoriamben’ny birao nasionaly sy ireo solontena avy any amin’ny faritra androany. Ny tsy fanarahan-dalana ataon’ny mpitondra, ny mahakasika ny Antenimierandoholona, ny raharaha Rolly Mercia ary ny tranga tsy fanjarian-tsakafo any Atsimon’ny Nosy.
FILAN-KEVITRY NY GOVERNORAM-PARITRA: notontosiana tany Antsohihy androany
Notanterahiana tany Antsohihy androany ny filankevitry ny gouvernora voalohany izay notarihan’ny filohan’ny repoblika ny Praiminisitra sy ireo ministra sasany eo anivon’ny Governemanta ary ireo governora. Tompon’andraikitra amin’ny fanatanterahana ny asa fampandrosoana amin’ny faritra ireo governora, raha fanazavana.